Nhau - Ndezvipi zvinhu zvehunhu hwemakemikari anchor
Chemical anchor bhaudhi, inova imwe yeanchor bolts, yakagara iri inofarirwa nevazhinji vanosimbisa nekuda kwekugona kwayo kuvaka uye yakanaka michina zvivakwa. Nekudaro, muchokwadi, kuchine vanhu vazhinji vasina kunyatsojeka nezve ruzivo rwechikemikari anchor. Uye zvakare, kune akawanda marudzi emakemikari anchors pamusika. Izvo hazvidzivirike kuti haisi sarudzo yakanaka kana uchitenga.
Naizvozvo, zvigadzirwa zvisina kukodzera kwazvo zvichatengwa. Izvi hazviwedzere chete mutengo, asi zvakare zvinokanganisa zvimwe zvakajairika mamiriro ekuvaka. Nhasi, rega mupepeti akutore iwe kuti ugovane rumwe ruzivo rwekutanga rwemakemikari anchor bolts.
Chemical anchor bhaudhi, iri mhando nyowani yekumhanyisa zvinhu, iyo inoumbwa neyemakemikari mumiriri, sikuruu, nati uye gasket. Kazhinji inoshandiswa zvakanyanya mu:
1. Iyo yekodhi keel yekodhi kodhi yakagadziriswa;
2. Anti-kudhumhana guardrail, isina mutsindo madziro;
3. Simbi mamiriro, rinorema mutoro rakagadziriswa;
4. Kumisikidza nekusimbisa simbi yeplate panguva yekubatanidza simbi yekusimbisa;
5. Mashini, conveyor bhandi system, yekuchengetedza system.
Ndezvipi zvakanakisa zvivakwa zvemakemikari anchors:
Iine hunhu hweacid uye alkali kuramba, kupisa kupisa, kupisa moto, weldability, yakaderera tembiricha senzwi, kumisikidza kumisikidza, nekukurumidza kurapa, nezvimwewo, diki yekumisikidza nzvimbo uye margin zvinodiwa, uye yakafara tembiricha yekuvaka.
Ini ndinowanzo sangana nevatengi vazhinji vachibvunza nezve mutengo wemakemikari anchor zvigadzirwa, uye mutengo waro mumusika zvakare unotangira kubva kune mashoma mauan kusvika kune anopfuura gumi euan seti. Mutengo wakajairika mumusika unobva pane dhayamita dhayamita yemamwe makemikari anchor mabhaudhi, kupfeka kwakasiyana, uye izvo zvinhu zvakasiyana.
1. Kutanga, ngatitaurei nezve mutsauko wepazasi sikuruu dhayamita. Izvo zvakajairika mumusika, iwo emhando yepamusoro mamodheru ndeaya: M8×110, M10×130, M12×160, M16×190, M20×260, M24×300, M30×360.
2. Mhando dzakasiyana dzekushongedza: iwo akasiyana machira emakemikari anchor mabhaudhi pamusika anowanzo kuve akapatsanurwa kuita kutonhora kwakakurudzira kemikari anchor mabhaudhi uye hot-dip kwakakurudzira chemakemikari anchor mabhaudhi.
3. Siyananisa zvichienderana nezvinhu zvakasiyana: makemikari anchor akakamurwa kuita kabhoni simbi yemakemikari anchor uye isina simbi yemakemikari anchor kana akasiyaniswa zvinoenderana zvakasiyana zvinhu. Carbon simbi yemakemikari anchor akapatsanurwa kuita giredhi 4.8 kemikari anchor, giredhi 5.8 kemikari zvimiso, uye giredhi 8.8 kemikari zvimiso. Pakati pavo, 5.8 giredhi emakemikari anchors akajairika mumusika. Iwo epamusoro emakemikari anchor akagadzirwa nesimbi inogadzirwa nemahombekombe makuru esimbi yenyika, senge Hangzhou Iron uye Simbi Plant (Hangzhou Iron uye Simbi), uye Maanshan Iron uye Simbi Plant (Maanshan Iron uye Simbi). Nekudaro, hunhu pamusika hurombo, uchishandisa simbi yekare. Yakagadzirwa muvira rechipiri.
Zvinoenderana nematanho emunyika: izvo zvinongedzo zvechigadzirwa zvinopihwa muyakajairika makemikari anchor mabhaudhi uye akajairwa makemikari anchor mabhaudhi zvikamu zvakajairika zvikamu, asi mune chaiwo mamiriro, mamwe mabhizinesi anozofunga urefu hwehurefu hwemhando dzakasiyana dzemakemikari anchor mabhaudhi maererano nemaitiro avo . Inosanganisira dambudziko rekuti kureba kwesikuru hakuna kusarudzika, zvinova zvinonzi zvisingaenzaniswi zvikamu. Nekudaro, mhando yezvisingaenzaniswi zvigadzirwa pamusika zvinowanzove zvakadzikira zvakanyanya kupfuura izvo zveyakajairika zvigadzirwa. Kana iwe uchida kutenga zvimwe zvemhando yepamusoro-zvisingaenzaniswi zvigadzirwa, unogona kubata wenguva dzose mugadziri kuti uzvigadzirise uye varege ivo vape yenguva dzose bvunzo mushumo uye warandi.
Mushure mesumo iri pamusoro, iwe unofanirwa kuve uine imwe nzwisiso yemakemikari anchor bolts, ko sei? Nenzira iyi, kana ndichiita sarudzo, ndinogona kamwe kamwe kunzwisisa kuti ndizvo here kana kuti kwete. Kusarudza kemikari chinotsigisa isainzi, uye haufanire kusarudza zvakasarudzika.